16-inch MacBook Pro kọrọ na ọ nwere okwu ịchaji MagSafe maka ụfọdụ ndị nwe ya - ntụnyere 2022
16-inch MacBook Pro kọrọ na ọ nwere okwu ịchaji MagSafe maka ụfọdụ ndị nwe ya
Highlander chọrọ: (Achọrọ / Ryan Sisters Series # 1)
Rubens, Adriana (Onye edemede)
Ekwuru na MacBook Pro nke anụ ọhịa 16 nke Apple nwere nsogbu nke pụtara na ụfọdụ ndị ọrụ na-achọpụta na laptọọpụ anaghị akwụ ụgwọ nke ọma site na iji njikọ MagSafe n'otu ọnọdụ.
Dị ka MacRumors kọrọ, ihe na-eme ebe a dị ka akụkọ sitere n'aka ndị ọrụ metụtara na Reddit (na saịtị nke teknụzụ) bụ na MacBook Pro anaghị akwụ ụgwọ mgbe agbanyụrụ ya kpamkpam.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na nke a bụ ọnọdụ akọwapụtara ebe laptọọpụ na-emechi (na mkpuchi mkpuchi) wee jikọọ eriri MagSafe‌, n'ọnọdụ ahụ, n'ọnọdụ nsogbu, ọ na-agba naanị oroma (yana ụgwọ mmetụta ụda) na batrị anaghị achaji. Agbanyeghị, ọ bụrụ na agbanyere chaja mgbe MacBook Pro na-agbanye wee gbanyụọ laptọọpụ, ọ ga-ana ya nke ọma.
Dị ka MacRumors si kwuo, ebe Apple nwere akwụkwọ nkwado maka ọnọdụ ebe ọkụ amber na-egbuke egbuke na-eme mgbe ọ na-ebufe, enyemaka ahụ adịghị ka ọ na-eme mgbanwe maka mkpọka ndị a kọrọ.
Nyocha: Atụrụ anya na ọ bụ ahụhụ sọftụwia dị mfe, ikekwe?
Yabụ kedu ihe na-eme ebe a dịka ndị nwe MacBook emetụtara si kọọ? Ma nke kachasị mkpa, ọ nwere aro ọ bụla iji dozie ya?
Akwụkwọ mmado mbụ sitere na eri Reddit dị n'elu na-ekwu na Nkwado Apple nyere mkpebi na-arụ ọrụ, mana ọ bụ naanị nwa oge. Ha na-ekwu na ndị otu nkwado ahụ ghọtara na Apple "maara nsogbu ahụ ma na-enyocha ya" ma akwadoro ya, dị ka ihe ngwọta nwa oge, iji kwụọ ụgwọ na ọnọdụ njikere, ma ọ bụ na mkpuchi meghere, ma ọ bụ dị ka egosiri n'elu, iji chekwaa chaja MagSafe. tupu atụgharị. gbanyụọ. akwụkwọ ndetu.
Azịza mbụ dị na eri a na-eme mkpesa banyere otu nsogbu ahụ wee kwuo na Apple ga-edochi MacBook Pro inch 16 ya (mgbe ọtụtụ nyocha nyocha nke onye ọrụ na-agba).
N'ime nzaghachi sitere na eri MacRumors na nke a, ọtụtụ ndị nwe ya nwere nchegbu kwuru na nke a bụ ahụhụ na ngwanrọ macOS, yana metụtara mmalite nke chaja ngwa ngwa (n'ịchọ ịmata, ọ bụrụ na ị na-eji chaja ọ bụla ọzọ karịa ụdị 140W nke bịara na ya. MacBook Pro, ọ gaghị ebu ngwa ngwa ma ọ bụ njehie a).
Yabụ enwere olile anya, ọ bụrụ na Apple nyochaa okwu a dị ka akwadoro, na ndozi nwere mmelite macOS nwere ike ịdị na-arụ ọrụ.
Ruo ugbu a, anyị agakwuru Apple maka ikwu okwu.